गोरामुमोमा भाजपा र तृणमूल खेमा : निरज जिम्बा भर्सेस महेन्द्र छेत्री : वाकयुद्ध जारी - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारगोरामुमोमा भाजपा र तृणमूल खेमा : निरज जिम्बा भर्सेस महेन्द्र छेत्री : वाकयुद्ध जारी
जिम्बा र छेत्रीको लडाईँ : मन घिसिङ हेरेको हेरेकै
हुन त गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा अहिले पनि फुटेकै हो। तर त्यतिखेर आधिकारिकरूपमा फुटेको थियो। गोरामुमो-ए, गोरामुमो-बी, गोरामुमो-सी-कोरुपमा। अहिले पनि गोरामुमो फुटिसकेको छ, तर आधिकारिक घोषणा भने छैन।
गोरामुमो एउटा महेन्द्र छेत्री खेमामा टुक्रिएको छ, अर्को निरज जिम्बा खेमामा। एउटै दलका यी दुइ नेताहरू अहिले अलगअलग वयान दिँदै हिँडिरहेका छन्।
जिम्बा भारतीय जनता पार्टीको टिकटबाट विधायक बनेका गोरामुमोका पूर्व प्रवक्ता हुन्। उनी विधायक बनेपछि उनको ठाउँमा महेन्द्र छेत्रीलाई प्रवक्ता बनाइयो। अहिले पूर्व र वर्तमान प्रवक्ताबीच वाक युद्ध शुरु भएको छ।
जिम्बाले ‘एनआरसीले पहाड़को इस्कुस, मुण्टा र जरालाई पनि छुँदैन’ भनेका थिए। महेन्द्र छेत्रीले ‘एनआरसीले पहाड़को इस्कुस, मुण्टा र जरालाई मात्र होइन सबैलाई छुन्छ, कीरा पट्याङ्ग्रालाई पनि छुन्छ’ भनेका छन्।
वाक युद्धको उद्गमस्थल भनेको गोरामुमोले उठाइरहेको छैटौं अनुसूचीको मुद्दा हो। महेन्द्र छेत्री समूह गोरामुमोले एनआरसी लागू हुँदा गोर्खालाई भारतीय नागरिकता प्रमाणित गर्ने पर्याप्त कागजपत्र नभएको भन्दै गोर्खालाई बचाउन पहाड तराई र डुवर्समा छैटौं अनुसूची लागू हुनुपर्ने जनाइरहेका छन्।
तर महेन्द्र छेत्रीलगायतको यही माग सुवासवादको विरुद्ध रहेको आरोप जिम्बाको छ।
‘जसले सुवासवादलाई मान्छन्, उनीहरू एनआसी, सीएए र एनपीआरसँग डराउनु भनेको सुवासलाई झूटो देखाउनु हो। सुवासवादलाई चुनौती दिनु हो,’ जिम्बाले भनेका छन्, ‘अस्तिसम्म हामीले भारतका प्रथम दर्जाको नागरिक हौं भनेर गोर्खा नागरिकता दिवस मनाएका हौं। त्यसो भए अहिले सीएए, एनआरसी र एनपीआरसँग डराउनेहरूले कुन सन्दर्भमा गोर्खा नागरिकता दिवस मनाए? 22 अगस्त 1988 मा भएको सम्झौताको दस्तावेज देखाएर यो हाम्रो ब्रह्मास्त्र हो, यो हाम्रो सञ्जीवनी बुटी हो भनेका थियौं।’
महेन्द्र छेत्री गुटका गोरामुमोले अहिले सीएए, एनआरसी र एनआरपीविरुद्ध जुन प्रकारले बयान दिइरहेका छन्, त्यसले सुवास घिसिङको त्याग-तपस्या र भारतीय गोर्खाहरूलाई प्रथम दर्जाको नागरिकको मान्यता दिलाउने योगदानलाई ओझेलमा पार्ने कार्य भइरहेको जिम्बाको आरोप छ।
जिम्बा आफैले छैटौं अनुसूचीको विरोध गरेका छैनन्। यस मागलाई उनले समय सान्दर्भिक रहेको तर यसैका लागि लागि सीएए, एनआरसी र एनपीआरको विरोध नै गरिहाल्नु भने ठीक नरहेको ठहर गरेका छन्।
जिम्बा स्वयं पनि गोरामुमो स्टेरिङ कमिटीका सदस्य हुन्। तर, यी भाजपा विधायकका अनुसार पछिल्लो स्टेरिङ कमिटीको बैठकबारे उनलाई थाह छैन, जुन बैठकमा सीएए, एनआरसी र एनपीआरको विरोध गर्ने निर्णय लिइएको थियो।
‘गोरामुमोभित्र पनि तृणमूल, माकपा, कङ्ग्रेस र भाजपापन्थी हुनसक्छन्। कतिजना गोरामुमो भएरै भाजपाको लाइनमा बोल्नसक्छन् भने कतिजना गोरामुमोकाहरू तृणमूलको लाइनमा पनि बोल्न सक्छन्,’ जिम्बाले आफू र महेन्द्र छेत्रीको राजनैतिक बाटोसमेत छुट्याएका छन्।
गोरामुमोभित्र यत्तिको खल्बल भइसक्दा पनि गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ भने मौन छन्। त्यो मौनतापछिल्तिर कुन नियत लुकेको छ? स्पष्ट अनुमान गर्न सक्ने स्थिति बनेको छैन।